बोस्टन कलेजको अनलाईन बहसः ‘दिगो व्यवस्थापन र भावी रुपान्तरण’ | BIC Startups
बोस्टन कलेजको अनलाईन बहसः ‘दिगो व्यवस्थापन र भावी रुपान्तरण’
चितवन जेठ २८ ।
चितवनको भरतपुरस्थित बोस्टन इन्टरनेशनल कलेजले उद्यमशीलता र नेतृत्व विकाश गर्ने उदेश्यले ‘दिगो व्यवस्थापन र भावी रुपान्तरण’का विषयमा छलफल गरेको छ ।
कलेज अन्तरगतका बिआईसी स्टार्टअप्स, काठमाडौँमा अवस्थित स्किल ल्याब र बोस्टन कलेजकै उद्यमशीलता र नेतृत्व कलबको सहकार्यमा मंगलबार अनलाईन मार्फत बहस गरेको हो । कलेज ‘उद्यमशीलता बहस’को २० औँ श्रृङ्खला अन्तरगत ‘दिगो व्यवस्थापन र भावी रुपान्तरण’ विषयमा छलफल गरिएको ‘उद्यमशीलता र नेतृत्व’ कलबकी मिडिया संयोजक साङपु शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।
मंगलबारको दिउँसा एक घण्टा भएको कार्यक्रममा ‘डोल्मा गु्रप’का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा ‘युनिभरसिटि अफ नाटिंघम’ का प्राध्यापक टिम गोचर अतिथिका रुपमा उपस्थित रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले देशको विकासका लागि विद्युतिय क्षेत्रसंगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘पर्यावरणीय र दिगो व्यवसायमा जोड दिदैं नेपालमा सोलार, हाइड्रोपावर, प्राविधिक कम्पनी, अस्पताल, फार्मेसीमा लगानी गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नीजि पुँजी र उद्यमी पूँजीमा जोड दिएर अगाडी बढ्दा देशको दिगो विकास गर्नसक्छौँ ।’
लगानीकर्ताले आफूले लगानी गरेको व्यावसायको योजना तथा नाफा नोकसानको बारेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ । कोभिड–१९ पछि लगानी मोडल कस्तो हुन सक्छ? सेवामा आधारित प्राविधिक कम्पनीहरुमा पनि माग संकट रहेको छ, त्यसको सामना कसरी गर्न सकिन्छ? भन्ने कार्यक्रममा सहभागीको प्रश्नमा प्राध्यापक टिमले व्यवसायको सुरुवातमा मागमा उतारचढाव हुनु आवश्यक बताउँदै खर्चलाई व्यवस्थापन गरेर व्यवसाय दिगो बनाउन सकिने बताउनुभयो ।
साथै उहाँले प्रविधिको अत्याधिक उपयोग गरेर तथा पर्यावरण वातावरणमा ध्यान दिएर व्यवसाय दिगो बनाउन सुझाव दिनुभयो । कोभिड–१९ पछी लगानीकर्ताहरु अत्याधिक लगानीका अवसरहरुको खोजिमा हुने भएकोले नवप्रवर्तन तर्फ अग्रसर हुन पनि अनुरोध गनुभयो ।
यी तिन संस्थाहरु मिलेर अप्रिल तीन गतेदेखि अनलाईन मार्फत नियमित ‘उद्यमशिलता बहस श्रृङ्खला’को आयोजना गर्दै आएका छन् । बोस्टन कलेज लगायत समुदायबाट गरि करिब ५५ जना भन्दा बढीको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको थियो कार्यक्रम बिआईसी स्टार्टअप्सको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरीएको थियो ।
उद्यमशीलता र नेतृत्व क्लबकी सदस्य स्यारोना क्षेत्र र उस्नता पाख्रिनले संयुक्त रुपमा सहजिकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा कलबकी सदस्य नम्रता गुरुङले धन्यवाद मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।